Abalawuli nabahlinzeki bokufinyelela - Ifektri Yesilawuli Sokufinyelela yaseChina
WS6000-M500P6 Intelligent Uxhumano Isilawuli Esingenantambo
I-WS6000-M500P6 iyisilawuli esingenantambo esinamasevisi amaningi esihlanganisa ukufakazela ubuqiniso, ukuphathwa kwenethiwekhi nokulawulwa kwephoyinti lokungena okungenazintambo, okubandakanya ukuphathwa okulula, ukulungiswa okulula, amandla amakhulu nokusebenza okuphezulu. Yenzelwe inethiwekhi encane naphakathi, ingaphatha kufika kuma-512 amaphuzu wokufinyelela (ama-AP). Ngesibonisi sokusebenza sedeskithophu esisha nesitayela sokuklama, i-WS6000-M500P6 ilula ukusebenza futhi kulula ukuyigcina nokuyiphaka, enganelisa kahle i-requir yamakhasimende ...
Isilawuli se-DCWS-6028-C Smart Access
I-DCN DCWS-6028-C isizukulwane esisha se-10G isilawuli esingenantambo esihlakaniphile. Idizayinelwe isizukulwane esisha samanethiwekhi angenazintambo ashesha kakhulu, ikwazi ukuphatha kufika kuma-256 finyelela amaphoyinti angenantambo (ama-AP) futhi ilungele inethiwekhi engenantambo encane naphakathi nendawo. I-DCWS-6028-C ihlanganisa ukuphathwa kwabasebenzisi ngqo, ukuphathwa kwe-RF okuphelele kanye nezindlela zokuphepha, i-super QoS nokuzula okungenamthungo, kuhlinzeka ngemisebenzi yokulawula ukufinyelela kwe-WLAN enamandla. I-DCWS-6028-C inesendlalelo esigcwele 3 core switch switch ...
I-DCWS-6028 (R2) Isilawuli Sokufinyelela Esinentambo Esingenantambo
I-DCWS-6028 (R2) iyisilawuli sokufinyelela esingenantambo esisebenza kahle (AC) samanethiwekhi aphakathi angenantambo, angaphatha kufika kuma-1024 amaphuzu wokufinyelela (ama-AP). Inikeza ukuphathwa okuphelele kwe-RF nokuphepha, i-QoS enamandla, ukuzulazula okungenamthungo nokulawulwa okuphelele kwama-AP, kungasetshenziselwa ukwakha inethiwekhi esezingeni eliphakathi nendawo yekhampasi, ihhotela, ihhovisi lebhizinisi, isibhedlela, njll. Ngehardware ASIC, DCWS-6028 (R2 ) ingaxhasa ukudluliswa kwezinga lomugqa lamaphakethe wedatha we-IPv4 / IPv6 futhi isekele umzila onamandla ...